Fanamboarana tongolobe | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Fanamboarana tongolobe
Ahoana no fomba iantsoana zana-bilia?
Nahoana izy ireo no manangona zana-borona? Mazava ho azy fa amin'ny fotoam-pijinjana haingana kokoa, hatramin'ny faran'ny volana Mey, ny fijinjana dia azo tsinjaraina, fa ny taolam-pamokarana dia roa volana na maromaro taty aoriana. Ankoatra izany, ny tongolobe, mipetaka amin'ny tany, ankoatra izay mipoitra eo aloha, dia manohitra kokoa ny aretina, tsy mihontsina amin'ny fisaritahan'ny bibikely.
Ireo toro-hevitra lehibe momba ny fikarakarana sy ny fambolena hazavana
Zenezy - zavamaniry tena ilaina amin'ny arsenal ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny. Manome sakafo mahasalama izy io ary mampitombo ny tsirony, ary manome fofona mahasalama ny vokatra kulinarina miaraka amin'ny fofona mahafinaritra. Ny ankamaroan'ny trondro dia afaka mahita tongolobe, fa misy kosa ny hafa, tsy dia misy karazana mendrika.
Fambolena sy fiompiana amin'ny fomba Shinoa
Ny fampiroboroboana tongolobe amin'ny fomba Shinoa dia safidy tsara ho an'ny fanangon-tsakafo manankarena sy salama, izay manana toetra marevaka tsara ary voatahiry ela. Miaraka amin'ny fambolena toy izany, ireo tongolobe dia nahazo ny haben'ny habeny, ny loko marevaka, ny mamy kely. Ny endriky ny karazam-bary azon'io fomba io dia ny fanehoana ny loha ivoina kely amin'ny endrika kely.
Maniry tongolobe isika ao amin'ny zaridainanay: singanina amin'ny fambolena sy fiahiana
Ny fisian'ny tongolobe dia tsy afaka manao sakafo marobe sy fiomanana, satria io zavamaniry io no mampiavaka ny tsiron'ny vokatra ary manome azy ireo ho maranitra. Однако видовое разнообразие этой культуры не ограничивается лишь известным всем луком-пореем, и неплохим альтернативным вариантом является лук-батун, описание которого представлено ниже.
Inona no manangom-bozaka mialoha ny fambolena, manamboatra tongolo amin'ny permanganate potassa sy sira
Raha jerena voalohany, tsy sarotra ny fizotry ny tongolobe ary tsy afaka ny hanana zavatra kely akory, saingy tsy izany no mitranga, satria ny ankamaroan'ny mpamboly maro dia miatrika olana maro izay afaka hamaha tsotra izao amin'ny fanarahana ny tolo-kevitr'ireo matihanina matihanina. Anisan'ny olana lehibe indrindra ny fananganana zana-tsipika mahavariana ny zavamaniry, izay mampihena ny mety hahazoana loko lehibe sy mamy.
Ny fomba hananganana tongolo gasy: ny fitsipika momba ny fambolena sy fiahiana
Ao amin'ny fomba mahandro sakafo maro no misy tongolo. Eo amin'ny natiora dia maro ny karazana azy, ary ny sasany amin'izy ireo dia mihinana. Avy amin'ity lahatsoratra ity no hianaranao hoe inona ny tsipìka miparitaka, ny fikarohana ara-teknolojika momba ny fambolena ary ny karazana fikarakarana ilaina. Fantatrao ve? Ny onyon slizun dia mihoatra ny zana rehetra hafa amin'ny votoatin'ny singa marindrano. Inona no dikan'ny slizun A slizun dia herintaona tsy hita isa izay an'ny Genion Onion, ny fianakaviana Onion.
Ny fitsipika fanangonam-bolo eo amin'ny lohan'ny lohataona
Ny lohataona misy tongolobe dia tsy afaka ny hamboly amin'ny volony, fa amin'ny loha ihany koa. Etsy an-daniny, toa tsy misy ny dingana mora kokoa: mampiakatra ny loha kely amin'ny tany, ary amin'ny fianjeran'ny vokatra lehibe. Raha ny marina, mba hahazoana ny vokatra tadiavina, mila mahafantatra sombina sasantsasany amin'ny fambolena zana-kazo amin'ny fomba mitovy.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fanamboarana tongolobe